Beta yechipiri yewatchOS 6.2.8 uye tvOS inowanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 6.2.8 uye tvOS yechipiri beta inowanikwa kune vanogadzira
Chipiri chapfuura iyo beta vhezheni ye macOS Catalina yakavhurwa uye maawa mashoma apfuura ayo e watchOS 6.2.8 yevagadziri. Pakutanga, Apple yakanga yatangisawo beta vhezheni yeTVOS uye nenzira iyi yakatovhara denderedzwa re beta shanduro. Vhiki rino kambani yeCupertino yakatanga zvigadzirwa zvebeta nenzira yakatetepa uye maawa mashoma apfuura vakaita kuti beta vhezheni yeOSOS iwanikwe kune vanogadzira vane shanduko mukuita nekusimba.
Apple iri kugadzirira pasi yeWWDC
Vhiki rinouya iri richava rapfuura kune WWDC uye shanduro dzazvino dzatinadzo dzinokosha kuvashandisi vazhinji vasingazokwanise kuvandudza kune idzva, saka ikiyi kuva neshanduro dzakatsiga uye dzakachengeteka. Izvi hazvireve kuti kana vakawana kutadza kwerudzi rweimwe mhando havazogadzirise, ichangosvika vhezheni yekuchengetedza ye macOS Yakakwira Sierra, asi kugadzikana uye kuchengetedzeka mavari kwakakosha kudzivirira matambudziko.
Iyi vhezheni itsva yeWOSOS inopa mashoma shanduko kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura uye parizvino tinogona kutaura kuti izvo zvirikuitwa nekambani iyi kusimbisa iyo sisitimu kuti igadzikane sezvinobvira. Rangarira kuti idzi beta shanduro dzeApple Watch dziri chete revagadziri uye isu hatina yeruzhinji beta vhezheni. Kune rimwe divi, tinogona kuve nedambudziko rakakura kana chimwe chinhu chikatadza kana kuisa idzi beta shanduro sezvo Apple Watch isingakwanise kudzoreredzwa kana tikasaenda nayo kuApple technical service, zvirinani kugara kure nemabetas.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 6.2.8 uye tvOS yechipiri beta inowanikwa kune vanogadzira
Safari Technology Preview 108 ikozvino yakagadzirira kurodha pasi
Apple yakazvipira kurwisa kushungurudzwa kwevana